Andro: 4 Janoary 2020
Fitomboan'ny vidin'ny ISPARK tamin'ny 2020?
FeesSPARK ny saram-piantsonan'ny Kaomin Metropolitan Istanbul dia nitombo ho 40 isan-jato. Naneho ny fihetsehan'ny vahoaka ny diabe nitranga tamin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fivoriana parlemanta tamin'ny volana Desambra 2019 tao IMM. lasa [More ...]
Fanentanana Piano Goodness ao amin'ny Station Metro Stationsküdar
Nanomboka tamin'ny hetsika favorsküdar - Çekmeköy ny hetsika fankasitrahana. Mpilalao mozika Barutay Kartal mitendry piano eo amin'ny toby Üsküdar hanampy ireo ankizy eny an-dalambe. Miasa amin'ny maha-manam-pahaizana manokana momba ny fanatanjahan-tena amin'ny Ministeran'ny Tanora sy ny fanatanjahantena [More ...]
Taxi amin'ny Trabzon Miverina amin'ny taxi
Ny fanombanana ny olan'ny Trabzon momba ny fandaharam-potoanan'ny fihaonana dia feno fanavaozana. ,Mer Hakan Usta, filohan'ny Chamber of Drivers and Automobiles, dia nanambara fa mino izy ireo fa ho faly amin'ny fanovana ny vahoakan'i Trabzon sy ny mpivarotra. [More ...]
Tany am-piandohan'ny volana Desambra, ny parkomats vehivavy voalohany no nanomboka niasa tao amin'ny Kaominina Metropolitan Eskişehir Metropolitan, izay nanambara fa hampiasa mpiasan'ny parlemantera vehivavy izy ireo miaraka amin'ilay fanambarana nambara tao amin'ny kaontiny media sosialy. Izy dia nanomboka niasa tao amin'ny Mahmut Pehlivan Street in Kızılcıklı tamin'ny andro voalohany. [More ...]
Tonga tao amin'ny Subway Narlıdere ny Station fahatelo
Fahrettin Altay - milina fanamboarana milina fanoratana metro tamin'ny Narlıdere metro no tonga tamin'ny biraony fahatelo. Izmir Metropolitan Municiel Rafitra rafitra, Bornova Evka 3 - Fahrettin Altay metro fanitarana Narlıdere'ye [More ...]
Fanamboarana Cengiz hanamboarana lalamby 2.7 ​​Billion TL any Kroasia
Cengiz Construction dia hanamboatra lalamby 2.7 ​​miliara kilao any Kroasia: Nanoratra ny tsangan-tsoratany mitondra ny lohateny hoe “Cengiz dia hanorina lalamby 2.7 ​​miliara kilao any Kroasia! Ş. Ireto ny antsipirian'ny lahatsoratra; Golfa [More ...]
Misra Oz Sel izay namoy ny zanany lahy tamin'ny lozam-piaramanidina tao Corlu dia nanokatra fanadihadiana roa
Mısra Öz Sel, izay namoy ny zanany Oğuz Arda Sel nandritra ny loza tamin'ny fiaran-dalamby tany Çorlu tamin'ny 8 Jolay 2018, dia nanambara fa nisy ny fanadihadiana roa nosokafana hiampangana azy noho ny naniratsira ny filoha sy ny fitsarana. Corlu distrikan'i Tekirdag [More ...]
IETT dia nanokatra andalana 34 vaovao, 15 amin'ireo no eo amin'ny sisiny eoropeana sy 49 amin'ny lafiny anatolianana, mba hanomezana ny filàn'ny mponina any Istanbul. Ny IETT dia mikendry ny hanome serivisy fitaterana mahafinaritra amin'ireo mponina ao Istanbul. Ho an'ny fitaterana mankany Marmaray [More ...]
Vaovao Tsara ho an'ny Movers! Fametrahana Tachograph nomerika nahemotra
Nanambara ny ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa fa nahemotra tamin'ny 30 jona 2020 ny fampiharana ny takelaka nomerika. Omaly tao Istanbul sy Ankara any amina tanàna maro, indrindra ny mpitatitra, ny minisiteran’ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa ‘takelaka Digital’ nateraky ny [More ...]
Fifandraisan'ny Minisiteran'ny Corps ny Fifandraisan'ny Corps Fifandraisan'ny Lozabe Amin'ny TCDD
Raharaha famonoan'olona tao Corlu taorian'ny famalian'ny ministera ny fihetsiky ny fanontaniana, ilay vavolombelona manam-pahaizana Bekir Binboğa, Sıddık Yarman sy Mustafa Karaşahin'e fifanarahana roa amin'ny fifanarahana mitokana ho an'ny iray tapitrisa 14 [More ...]
Advanced Teknolojia mba hanafaingana ny fiovan'ny Torkia Domestic Car
Bursa nokarakarain'ny Oniversiten'i Tiorkia Technical ny fiara sy Bursa 'tontonana, ny vahiny BCCI Filohan'ny Burkay Ibrahim, hoy ny famokarana fiara an-toerana dia hanafaingana ny mpanelanelana Tiorkia-ambony sy ny fiovam-pon'ny avo-teknolojia orinasa mpamokatra entana, [More ...]
Streetzmit Salim Dervişoğlu Street dia ho Alternative amin'ny D-100
Kocaeli Metropolitan Metropolitan, izay nametraka tetikasa hanamaivana ny fivezivezen'ny fiara sy hanamorana ny fitaterana olona, ​​manokatra ny lalana Izmit Salim Dervişoğlu, izay miitatra ho lalana 2 × 2 roa. Ho solon'ny vahaolana amin'ny D-100 Highway [More ...]
Munzmir Metropolitan Munisipaly Niorina ny toeram-piantsonan'ny fiara fitaterana ho an'ny fiantsonan'ny fiara
Izmir Metropolitan Monisipaly, ny voalohany amin'ny karazany amin'ny alalan'ny fanaovana sonia ny tetikasa amin'ny fiantsonan'ny fiara tamy naorina ao Torkia. Ny toeram-pivarotana any Menemen no vahaolana amin'ny olan'ny valala ao amin'ny tanàna. Izmir Metropolitan Munisipaly, za-draharaha manerana ny tanàna [More ...]
Ireo manam-pahaizana manokana amin'ny lozam-piaran-dalamby Payorlu dia mandoa 14 tapitrisa TL Ho an'ny asa amin'ny consultant
Accidentorlu lozam-piaramanidina notendrena ho manam-pahaizana Mustafa Karaşahin Sıddık Binboğa Yarman 14 asa consultant isam-bolana ho an'ny Minisiteran'ny fitaterana niseho ho nahatratra 1 tapitrisa Ariary. Mametraka ao amin'ny Fahamarinana Plus [More ...]